ခပ်ဝေးဝေးလေးနေရအောင်နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခပ်ဝေးဝေးလေးနေရအောင်နော်
- Uncle Lay
Posted by Uncle Lay on Jun 8, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
ဆေးလိပ်ဆိုတဲ့ အရာမကောင်းမှန်း သိပေမယ့် ဖြတ်ရတာ အတော်ခက်တတ် ကြပါတယ်။ စမိတာနဲ့ ဖြတ်ရခက်နေတဲ့ သူတွေကိုလဲ စာနာမိပါတယ်။ ကူလဲကူညီချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ် သိထားတဲ့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေဘဲ ဆေးလိပ်ရဲ့ဆိုးကျိုးလေး တွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို သိထားပြီး သွားရင် “ငါဖြတ်သင့်တယ် “ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတော့ ၀င်စေချင်တယ်။ ဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေမို့ အကူအညီ ပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက် လေးတွေကို အမဇင် (ခ) မမွန်းသက်ပန်က ပို့စ်တခုရေး ပြီးသားမို့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခင်မင်တဲ့ သူတွေ အပါအ၀င် လူအားလုံးကို ဆေးလိပ်နဲ့ ကင်းဝေး စေချင်တာ ဆန္ဒအမှန်ပါ။ ဆေးလိပ်နဲ့ သူ့ရဲဆိုးကျိုး ရလဒ်လေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) စသောက်မိတာနဲ့ ဖြတ်ဖို့ခက်ပြီများသောအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ အပေါင်းအသင်းများရဲ့ စေ့ဆော်မှု၊ ကိုယ်တိုင် ကလည်း လက်တည့်စမ်းချင်မှု၊ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေ ဖြစ်မှုစတဲ့ အချက်ကလေးတွေကနေ တွန်းပို့မှုကြောင့် ဆေးလိပ်ကို စမ်းသောက်မိ တတ်ကြပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အကျင့်ဟာ စမိတာနဲ့ ဖျောက်ဖို့ အတော်ခက်ခဲတဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဆေးလိပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Tobaccoမှာ စိတ်ကိုစွဲလန်းစေတဲ့ နီကိုတင်း (nicotine) အမြောက်အများ ပါဝင်နေလို့ပါ။ နီကိုတင်းကို စသုံးမိတာနဲ့ နောက်ထပ် သုံးစွဲချင်အောင် စွဲလန်းစေပြီး စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်(၂) ဆေးလိပ်ထဲမှာ တခြားဘာတွေ ပါသေးလဲ
* ကင်ဆာဖြစ်စေသော carcinogen တမျိုးဖြစ်တဲ့ ကတ္တရာစေး
* စိတ်ကိုစွဲလန်းစေပြီး သွေးတွင်း အဆီဓါတ်ကို မြင့်တက်စေတဲ့ နီကိုတင်း
* အဆုတ်အတွင်း အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်မှု လျော့နည်းစေပြီး အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် တို့ အဓိကပါဝင်ပါတယ်။
(၃) ဆေးလိပ်ကြောင့် ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်မလဲ
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေဟာ အခြားသူတွေထက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းများပါတယ်။ ကင်ဆာထဲမှာမှ အဆုတ်ကင်ဆာ (Lung Cancer)၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ (Throat Cancer)၊ နှင့် ခံတွင်း ကင်ဆာ (Oral Cancer) များ အဖြစ်များပါတယ်။ ထို့ပြင် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ (Kidney Cancer)၊ အစာရေမျိုကင်ဆာ ( Oesophagus Cancer) ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ (Bladder Cancer) ၊ ပန်ကရိယကင်ဆာ ( Pancreas Cancer) ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ( Cervical Cancer) တို့ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပါ ဆက်စပ်လျက် ရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ နှစ်ရှည်လေလေ သောက်သုံးတဲ့ အရေအတွက် များလာ လေလေ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေနှုန်း ပိုပိုများလာလေလေပါဘဲ။
နီကိုတင်းကြောင့် ကိုလက်စတရော (Cholesterol) နဲ့ သွေးတွင်း အဆီဓါတ်တွေ များလာပြီး နှစ်ကြာလာတဲ့ အခါမှာ သွေးကြောနံရံတွေ ထူလာပြီး သွေးကြောတွေပါ ကျဉ်းလာ စေတယ်။ သွေးကြောတွေ ကျဉ်းလာတဲ့အခါမှာ သွေးများဟာ ကောင်းစွာ မစီးဆင်းတော့ဘဲ သွေးခဲမှုတွေ ဖြစ်စေကာ သွေးကြောတခုလုံးကို ပိတ်စေပါတယ်။
နှလုံး မှာရှိတဲ့ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက နှလုံးသို့ သွေးရောက်အောင် မပို့နိုင်တော့ဘဲ Heart Attack ဖြင့် သေဆုံးသည်ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဦးနှောက်အတွင်းရှိ သွေးကြောများ ပိတ်ပါက လေတခြမ်းဖြတ်ခြင်း နှင့် လေဖြန်းခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ် အတွင်းရှိ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက ကျောက်ကပ်ကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ ရှိတဲ့ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက သွေးမလျောက် နိုင်တော့ဘဲ ပုပ်သွားကာ ခြေထောက် ဖြတ်ပစ်ရသည်ထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဟာ ကိုယ်တွင်းက အဓိက အဂါင်္တွေ အကုန်လုံးကို တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေးပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်သူ တွေဟာ ချောင်းခဏခဏ ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဆေးလိပ်ကြောင့် အဆုတ်အတွင်းရှိ လေအိတ်ငယ်လေးတွေ ပျက်စီးပြီး လေပြွန်ကိုလဲ ယောင်ယမ်းစေကာ လေပြွန်ကြော တလျောက်လုံးကိုပါ ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချောင်းခဏခဏဆိုးခြင်း နှင့် အသက်ရှုမ၀ခြင်း တို့ကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
* ဆေးလိပ်ဟာ သွားတွေကို ၀ါစေပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်း တို့ကိုဖြစ်စေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
* ဆေးလိပ်ကြောင့် သွေးကြောနံရံတွေ ပျက်စီးပြီး သွေးတိုးရောဂါ ကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဟာလည်း နှလုံးရောဂါ နှင့် လေဖြတ်ခြင်း တို့ကိုဖြစ်စေဖို့ တွန်းအားတခု ပါဘဲ။
* ဆေးလိပ်မှာ ပါတဲ့ နီကိုတင်းဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်အဂါင်္မှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကိုပါ ကျဉ်းစေပါတယ်။ သွေးကြောကျဉ်းပြီး သွေးကောင်းစွာ မစီးဆင်းမှုကြောင့် လိင်အဂါင်္ရဲ့ မျိုးပွား ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကိုထိခိုက်ပြီး(Erectile Dysfunction) ဖြစ်စေပါတယ်။ အသက် ၃၀ မှ ၄၀ကြား ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသားများရဲ့ ၅၀% ဟာ Erectile Dysfunction ကိုခံစားရ တတ်ပါတယ်။
* ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိခင်တွေမှာ ကလေးမွေးဖွားပါက လမစေ့ဘဲ မွေးခြင်း နှင့် ပေါင်မပြည့်ခြင်း တို့ကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
* မိဘတဦးဦးက ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ဖြစ်နေပါက အတူနေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်မှာ ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်စေဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားရတာ အမှန်တကယ်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ တခါဖြတ်ကြည့် မနေနိုင်၊ ပြန်သောက် လုပ်ရင်းကနေ တဖြေးဖြေးနဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါ ကျလာတတ်ပါတယ်။ ဇွဲမလျော့ပါနဲ့။ ဒီတခါမရ ရင် နောက်တခါ ရပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်လာမယ့် ရောဂါတွေ အပိုကုန်တဲ့ ငွေကြေးတွေ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ် မိသားစုရဲ့ အနာဂတ် စတာတွေကို အသေအချာ တွေးပါ။ စိတ်ကို ခိုင်ခိုင်ထားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါ။ အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကြိုးစား မှုတိုင်းကို သင့်ရဲ့ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် ကလဲ အသိအမှတ်ပြုမှာပါ။ တကယ်ဆေးလိပ် ပြတ်သွားတာနဲ့ သူခေါ်ဆောင်လာမယ့် ရောဂါဆိုးတွေကနေ ကင်းဝေးပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာပါ။ အားလုံးဘဲ ဆေးလိပ်နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးလေးမှာ နေကြရအောင်နော်။ အားလုံးဘဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော လူမှုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
ဒီပို့စ်လေးအတွင်း ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြရအောင်နော် ဟူသော ပို့စ်လေးအား ဝေမျှဖို့ လင့်ခ်ခွင့် ပေးခဲ့သော ချစ်မ မဇင် အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒီနေ့— ဆေးလိပ် ကြာင့် ဆေးရုံတက်နေသော သူငယ်ချင်းအားသွားတွေ့ပြီး တင်ဖြစ်လိုက်တာပါ အရင်ကတင်ပြီး/ဖတ်ပြီးကြရင်လည်း ရင်လည်း..။
About Uncle Lay
ုUncle Lay has written9post in this Website..
View all posts by Uncle Lay →
ဆေးလိပ် ကို ဖြတ်မလို့ ကြိုးစားနေပါတယ် …
ဒါလဲလေ အခုတလော မုန်တိုင်းထန်တဲ့ သတင်းတွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို
တားလည်း ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်..
တကယ်တော့ အစသွားလုပ်ပြီး အလေ့အကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါ။
အခုတော့ ကွမ်းစားပြီး လှည့်ထိန်းနေပါတယ်။
ခုတလော တိုက်ပွဲတွေကြမ်းနေလို့ ဖက်ကြမ်းလေးပဲ ဖွာနေရပါတယ်ဂျာ.. :? :?
အစကောင်းမှ အနှောင်း သေချာမယ် ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ
အရက် ဆေးလိပ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မွေးကတည်းက သောက်တတ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။
မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုတာ မ စ မိရင် အကောင်းဆုံးပေ့ါ။
စ မိ ပြီး ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတာလည်း မဆိုးပါဘူး။
ကျွန်တော် ကြားဖူးတာလေးနဲ့ သိတာလေးပြောရရင်. .. ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖြတ်… အရက်ဖြတ်ဖြတ် ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်.. ပထမကိုယ့်ကိုကိုလေ့လာရမှာကတော့ လူမှာလိုအပ်လို့လူကဆာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်က ဆာတာလားဆိုပြီးစဉ်းစားရမယ်။ ထမင်းဆာတာ ရေဆာတာကြတော့ လူကလိုအပ်လို့ကို ဆာတာပါ။ ဆာတာကို မစားရင် ဒုက္ခတွေ့မှာပါ။ ဆေးလိပ်ဆာတာကတော့ လူမှာလိုအပ်လို့ လူက ဆာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကနေ ဆာတာပါ။ စိတ်ကဆာတာမှန်သမျှဟာ လူကိုကောင်းကျိုးမပေးပဲ ဆိုးကျိုးပေတတ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို သတိပြုကြည့် နေပြီး …. သတိလေးနဲ့ဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာလေးကိုတင်ပြတာပါ။
ကျနော်က ဆေးလိပ်ကိုဖြတ်မယ် ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်တာ (၈)လလောက်ကြာပြီးမှ
ပြန်သောက်ဖြစ်တယ်။ခုတော့ ဖြတ်ထားတာ (၆)လလောက်ရှိနေပြန်ပါပီ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်တော့ ကွမ်းစားပါတယ်။ကွမ်းမစားရင် ဆေးလိပ်ပြန်သောက်တယ်
နဲ့ လူလဲ လုံးချာကို လိုက်နေပါရော။
သားဦး၊မြေးဦး ဖြစ်သလို ကျွန်တော်လဲ ဖြစ်ခဲ.တာ နှစ်ပေါင်းများစွာပဲ။ ဘာနဲ.မှ မဖြတ်ပဲ ဒီအတိုင်း တိကနဲ ဖြတ်မှရတော.တယ်။ ဒုက္ခတော. တော်တော်ခံလိုက်ရတာပေါ.ဗျာ။
ဘာနဲ.မှ လှည်.မထိန်းတာကောင်းပါတယ်။ ကွမ်းကပိုဆိုးလိမ်.မယ် ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်း ကိုယ်.ကိုကိုယ် control ရအောင်လုပ်ပြီး ဖြတ်ကြည်.ပါလား။ ဒုက္ခခံရတာ အလွန်ဆုံး(၂) လပေါ.။ ok သွားပါလိမ်.မယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကြောက်ပြီး ဖြတ်မယ်လို. ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက်နေ.ကျ သောက်ချင်လာတော. မကြောက်တော.ပဲ ပြန်သောက်ဖြစ်တာ အကြိမ်ပေါင်း များစွာပဲ။ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံနဲ. ပြန်သောက်ပါတယ်။ အခုတော.အောင်မြင်သွားပါပြီ။ ပြတ်သွားတာ တစ်နှစ်ပြည်.သွားပြီ။” စိတ် ” ပါပဲလို. အခုတော. ပြောနှိုင်ပါပြီ။ ရှေ.မှာလာသောက်နေလဲ မသောက်ချင်တော.ပါဖူး။